ချစ်စံအိမ်: လုပ်ဖြစ်နေတဲ့အလေ့အကျင့်ကောင်း (၂)..
မင်္ဂလာပါ.. လမင်းစာတွေတတ်နိုင်သလောက်ပြန်ရေးပါတော့မယ်.. ဖေ့စ်ဘုတ်အပိတ်ခံလိုက်ရလို့ ပါ..:P
အဆိုးထဲက အကောင်းပေါ့.. ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ပိတ်လိုက်တဲ့သူကသူတော်ကောင်းလေးပဲဖြစ်မှာပါ..:Dပိတ်လိုက်တာလည်းကောင်းပါတယ်လေ အပိုအလုပ်တစ်ခုလျော့တာပေါ့ ။
အခုပိုစ့်က လမင်း ဘာစာအုပ်တွေဖတ်တတ်လည်း ဘယ်တရားတွေနာဖြစ်လည်း ရေးမယ်ပြောထားတာလေးရှိတော့ရေးလိုက်ပါတယ်။။။။
အများဆုံးဖတ်ဖြစ်တာ ဆရာတော်ဦးဆန္ဒဓိက စာအုပ်တိုင်းလိုလိုဖတ်ပါတယ်။။ ဆရာတော်လည်းဒီကြွရင်ယူလာတတ်ပြီး ဒကာ၊ ဒကာမတွေကို လက်ဆောင်ပေးတတ်တော့ မ၀ယ်ပဲဖတ်ရပါတယ်။
ဒါလည်းကုသိုလ်ကံတစ်မျိုးပေါ့နော်.. ဖတ်ခွင့်ရတယ်။။ ဖတ်နိုင်တဲ့ အသိဥာဏ်ပါတယ်။။။ မျက်လုံးတွေလည်းကောင်းသေးတော့ဖတ်နိုင်တယ်.. ဒါဟာ နည်းတဲ့ကုသိုလ်ကံမဟုတ်ဘူးလေ။။။
ဦးဆန္ဒဓိက စာအုပ်ဖတ်ရကျိုးက စိတ်ထားတတ်လာတယ်.. အကောင်းမြင်တတ်လာတယ်.. အကျိုးအကြောင်းကိုနားလည်လာတယ်...တစ်ယောက်တည်းနေချင်စိတ်တွေပိုများလာတယ်..:) ပြီတော့လမင်းက ဆရာတော်ကို လေးစားကြည်ညိုအားကျတာလည်းပါတယ်။။ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲတော့မထားပါဘူး။။ မျက်စိရှေ့ ရောက်လာတဲ့
.နောက်ထပ်ဖတ်တာက ဆရာတော်ဦးဇောတိက စာအုပ်တွေဖတ်ပါတယ်။. ဆရာတော်စာအုပ်ကိုတော့မြန်မာပြည်ကလက်ဆောင်ရတာတို့ ပို့ ပေးတဲ့သူရှိမှဖတ်ရပါတယ်.. ဦးဇောတိက
စာအုပ်တွေလည်းလမင်းကြိုက်ပါတယ်.. ဆရာတော်ရဲ့ ဒဿနတွေ အတွေးအခေါ် စိတ်သဘောထားတွေ အရမ်းမြင့်တယ် ..မှတ်သားစရာတွေအများကြီးပါတယ်.။ လိုက်နာပြီးလုပ်မယ်ဆိုလည်း အကျိုးများစွာရှိပါတယ်..။။
လက်ရှိဖတ်နေတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ စာအုပ်က တွေးမိတိုင်းပျော်တယ်။။ ခဏခဏဖတ်တယ်။။ ဖတ်တိုင်းလည်းမရိုးစေရဘူး.။ သေချာဖတ်လေ လေးနက်မှုရှိလေပါ။။အရမ်းကောင်းပြီး လမင်းအရမ်းကြိုက်တဲ့စာအုပ်ပါ..
ဆရာတော်ထွက်ထားသမျှစာအုပ်တွေထဲက အနှစ်ချုပ်တွေလည်းပါတော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပါ။။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို အခြေခံလောက်ပဲသိပြီး သေချာလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့.. မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ စာအုပ်တွေကိုဖတ်စေချင်ပါတယ်.. အခြေခံကအစ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆို အမိန့် အနှစ်ချုပ်အထိကို ဆရာတော်ကြီးကရေးသားထားပါတယ်။။ ဆရာတော်က စာတွေအများကြီးရေးသားခဲ့ပါတယ်။။ကျေးဇူးကြီးမားပါတယ်။။
လမင်းဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်တွေကတော့ ၁ ဗုဒ္ဓ၀င် အမေးအဖြေ.. ၂ အနာဂတ်သာသနာပြုပြင်ရေးသြ၀ါဒ တရားတော်
၃၊ ရတနာဂုဏ်ရည်.. ၄ . ဗုဒ္ဓဘာသာတိုသိသင့်သောအခြေခံ တို့ များစွာထဲက လမင်းဖတ်ဖူးတာနဲ့ မှတ်မိတာလေပါ လမင်းစာအုပ်တွေနဲ့ ဝေးနေတာကြာနေပြီး။။ ပါဠိတွေသိပ်မဖတ်နိုင်ပါဘူး ဘာသာပြန်တွေပဲဖတ်တာများတယ်။။
နောက်ထပ် ဖတ်လို့ ကောင်းပြီးစိတ်ထဲစွဲစေတာကတိပိဋ္ဋက ယောဆရာတော်အိတ်ဆောင်စာအုပ်လေးတွေပါ ကဗျာလေးတွေလိုရေးစပ်ထားတော့ ဖတ်လို့ ကောင်းသလို လင်္ကာလေးတွေပါတော့မှတ်ရလွယ်ပါတယ် ။။။
လူငယ်တွေအကြိုက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်...ဆရာတော်ဦှးဆန္ဒဓိကနဲ့ ယောဆရာတော်စာအုပ်တွေကိုတော့ မိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေအတွက်ဝယ်တာကိုတွေ့ သလို လူကြီးလူငယ်မရွေးကြိုက်ကြပါတယ်။။။
တရားနာဖြစ်တဲ့ဆရာတော်တွေကတော့ သီတဂူဆရာတော်ကြီးရဲ့ တရားတွေနာဖြစ်တယ်။ ဆရာတော်က ဗဟုသုတကြွယ်တော့ စာအုပ်တွေထဲမပါတာတွေမသိတာတွေလည်းသိရပါတယ်။။
ဆရာတော်ဒေါက်နန္ဒမာလာ တရားတွေလည်းလမင်းကြိုက်ပါတယ်။။ တော်တော်များများကို နာဖြစ်ပါတယ်။။
ဥူသုမင်္ဂလ ဒယ်အိုးဆရာတော်လို့လည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။။ ဆရာတော်က ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုလူဘောင်လူသဘောတွေနဲ့တိုင်းတာပြီဟောလေ့ရှိပါတယ်။။ ဥပမာ လမင်းလို လူပိန်းနားလည်အောင်လည်းဟောနိုင်ပါတယ်။။စကားအသွားအလာတော့နဲနဲကြမ်းပါတယ်။။
ကြမ်းတယ်ဆိုတာကလည်း ဘုန်းကြီးနဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေပြောသလိုပြောတာမဟုတ်တော့ နားထဲတစ်မျိုးဖြစ်တာလေးလောက်ပါ။။ ကျုပ် တို့ ခဗျာတို့ သုံးတတ်တာမျိုးကိုပြောတာပါ..:)
အခုမြန်မာပြည်မှာ လူတော်တော်များများကြိုက်တယ်လို့ လည်းသိရပါတယ်။။
၀ိပါဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးနာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးတရားတွေကိုတော့နာဖူးပါတယ်..
လေနက်တော့ ဥာဏ်မမှီဘူးဖြစ်နေတယ်။။ လူကြီးအကြိုက်ပေါ့.. အကြိုက်ချင်မတူကြဘူးလေ..
ကဲဒီလောက်ဆို လမင်း ဘာစာအုပ်ဖတ်လဲ ဘယ်တရားတွေနာလည်းဆိုတာတော့ကုန်ပါပြီး။။
ပြောစရာလေးရှိတာက လမင်း ဘယ်စာရေးဆရာစာအုပ်တွေမှ မဖတ်တတ်ပါဘူး။။ အခုခေတ်နာမည်ကြီးနေတဲ့စာရေးဆရာတွေလည်း နာမည်ကြီးလို့ ကြားဖူးတာပဲရှိတယ် .. မဖတ်ပါဘူ။။
၀ထ္ထုလည်းမဖတ်ဖူးပါဘူး။။ ၀ထ္ထုစာအုပ်ဖတ်လို့ ကုန်သွားမဲ့အချိန်ကို လမင်း တရားစာအုပ်ဖတ်ပါတယ်။။
အကျင့်လိုပဲပြောရမလား ။။ အမေပဲ အကျင့်လုပ်ထားလို့ လာမသိဘူး။။။ ငယ်ငယ်တည်းက ၀ထ္ထုတွေ ကာတွန့် တွေ
မဖတ်ရပါဘူး။။ ကျောင်းစာနဲ့ တရားစာသာ ဖတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်..။။။ လမင်းက... အမေ ဗဟုသုတ ရအောင်စာအုပ်အစုံဖတ်သင့်တယ်လို့ ပြောလိုက်ရင်.. တကယ်ဗဟုသုတရချင်တာလားလို့ အမေပြန်မေးတတ်ပါတယ်။။။ ဟုတ်ကဲ့လို့ ဖြေလိုက်အပြီးမှာ တရားစာအုပ်ပဲ.. လမင်းရှေ့ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။။ အမေကလည်းတစ်ခါလာလည်းဒါပဲလို့ ပြောရင်..
အဲဒီ တစ်ခါလာလည်းဒါပဲစာအုပ်ထဲက သမီးအလွတ်ရတာ အမေကိုဆိုပြပါအုံးလို့ ပြောလိုက်ရင်လမင်းမဆိုပြ မဖတ်ပြနိုင်ပြန်ဘူး။။။ မှတ်ထားသမီး ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆို အမိန့် တွေက ဘယ် သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ကမှရှာလို့ မတွေ့ နိုင်တဲ့
အမှန်တရားတွေရှိတယ်။။ အခုခေတ်မှာတောင်ရှာဖွေလို့ မရနိုင်တာတွေကို ဗုဒ္ဓက လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀
လောက်ထဲကရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့လို့ ရေးသားခဲ့တဲ့ အဆို အမိန့် တွေ သမီး ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတွေ ဆုံးမမှုတွေကိုလေ့လာမှတ်သား ကျင့်သုံးပါ။။ သမီးဘ၀မှာဘယ်တော့မှလူအောက်ကျတာတို့ ခေတ်နောက်ကျကျန်ခဲ့တာတို့ မျိုးမဖြစ်စေရဘူး....အမေဆုံးမဖူးတဲ့စကားပါ။။
လမင်းလည်းပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါတယ်။။ နာမည်ကြီး ကမ္ဘာကျော်တွေပြောတဲ့ဒဿနတွေ သီအိုရီတွေက လွန်ခဲ့သော(၂၅၀၀)ကျော် လောက်ထဲက ဗုဒ္ဓဟောပြောခဲ့တာတွေ တွေ့ ရှိခဲ့တာတွေကို ခေတ်စကားနဲ့ ပြန်လည်းပြောဆိုကြတာမျိုးတွေပါပဲလေ.. အင်တာနက်တက်လို့ မျက်စိရှေ့ ရောက်လာရင်တော့ ကြိုက်နှစ်သက်တာလေဆိုမှတ်သားတတ်ပါတယ်။။။
ဘလော့မောင်နှမတွေတင်ထားတဲ့ပိုစ့်တွေ ကဗျာတွေလောက်ပဲဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။။ အမှန်ဝန်ခံရရင် ဘယ်စာရေးဆရာဝထ္ထုတွေ ကဗျာတွေမှမဖတ်ပါဘူး။။ လမင်းရှေ့ ရောက်လာရင်တော့ဖတ်လိုက်တယ် ပြီတော့မေ့သွားပါတယ်။။ ဗမာကားတွေတော့ကြည့်တတ်တယ်။ ၀ထ္ထုဘယ်သူဆိုတာလောက်တော့တွေ့ မိပါတယ်။။
လမင်းအကြောင်းတော့သိကုန်ပါပြီးစာဖတ်အားကောင်းပုံကို ဟီး.. ဒီလောက်ပါပဲရှင်.....
အပေါ်ကရေးခဲ့တဲ့ဆရာတော်စာအုပ်တွေ တရားတွေတော့ ဖတ်စေချင် နာစေချင်ပါတယ်....
လမင်းစားပွဲရှင်းနေတာပဲနော်...အဲ့လိုတွေရှင်လို့ ပစ္စည်းလည်းခဏခဏပျောက်ပါတယ်။။ :)
အိမ်မက်ကောင်းကင် September 15, 2012 at 12:28 AM
မမ လမင်းလေးရေ အရှင်ဆန္ဒာဓိက တို့ ဥူသုမင်္ဂလ ဒယ်အိုးဆရာတော် တို့ တော်တော်များများဖတ်ဖူးပါတယ်
မမလမင်းရေ မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ) အရှင်ဇ၀န ကော်ဖတ်ကြည့်ပါလား
Facebook ပိတ်ခံရတယ်ဆိုတာ သိရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး
Unknown September 15, 2012 at 2:24 AM
ကောင်းတာတွေ ရေးပြီးပြီဆိုတော့......နောက်post မှာ.......
တတိယမြောက်သမီးတော် September 15, 2012 at 2:52 AM
သမီးတော်ကတော့ လူမိုက်ဆန်ဆန် နေရင်နေမယ်
တရားနဲ့ဝေးပြီးတွေ့ တာမဟုတ်လို့ 
စံပယ်ချို September 15, 2012 at 3:05 AM
ဖဘ ပိတ်ခံရတယ်ဆိုလို့ အံ့သြပြီးစိတ်မကောင်းဘူးလမင်းရေ
Sweety Snow September 15, 2012 at 12:37 PM
အရှင်ဆန္ဒာဓိက စာအုပ်တွေတော့ တော်တော်များများဖတ်ဖြစ်တယ် အစ်မ.. ။ ဖေ့ဘုတ်ပိတ်လိုက်တော့လည်း အချိန်ကုန်သက်သာသွားတာပေါ့.. ညီမတော့ အဲဒါနဲ့ပဲ အချိန်တွေကုန်လွန်းလို့ :)
မြတ်နိုးသူ September 16, 2012 at 3:06 AM
လရိပ်အိမ် September 16, 2012 at 3:35 AM
အန်တီလေးမေခင် September 17, 2012 at 6:40 AM